Guddoomiye Mursal: Aniga iyo Lafta-gareen xilka waan ka tagaynaa hadii aan soo deyn weyno Roobow – Kalfadhi
Guddoomiye Mursal: Aniga iyo Lafta-gareen xilka waan ka tagaynaa hadii aan soo deyn weyno Roobow
BAYDHABO, 22 JAN 2019 (KALFADHI)-Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee BFS oo kulan kula qaatay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka KG odayaasha dhaqanka maamulkaasi iyo qeybaha Bulshada rayidka ah, ayaa si kulul uga hadlay xeragga Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu-mansuur oo gacanta Dowladda ku jira in kabadan 30 cesho.
Guddoomiye Maxamed Mursal ayaa odayaasha dhaqanka u sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya iyo Reysal Wasaare Xasan Cali Kheyrre uu dhowr jeer kala hadlay arinta Sheekha loona balan qaaday in lasii deyn doono sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxa uu sheegay in ay socoto sidii lagu sii deyn lahaa Abuu-mansuur oo u xiran Dowladda Soomaaliya xoriyadiisana uu heli doono sida ugu dhow. Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa odayasha ka dalbaday iney dulqaataan arintaasina uu ku jiro isaga iyo Madaxweyne Lafta-gareen.
“Arinta Sheekha waan ku jirna, dhowr jeer ayaa Madaxweynaha iyo Reysal wasaaraha kala hadlay waxayna ii balan qaadeyn in waqti dhaw lasii deyn doono”, ayuu u sheegay odayaasha dhaqanka KG Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
“Aniga iyo Madaxweyne Lafta-gareen ayaa arintaan soo dhameyn doono sida ugu dhaw, hadii aan dhameyn weyno waan idin baneynaa kuraasta si loo keeno qof soo deyn kara Roobow”, ayuu markale yiri Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uusan raali ku aheyn xirnaanshiyaha Abuu-mansuur balse ay aheyd qalad dhacay. Hadda ayuu sheegay in Madaxweyne Lafta-gareen waqti badan geliyay sidii loo sii deyn lahaa Sheekha ayna socoto dadaalkaasi oo meel wanaagsan marayo.
“Cabdicasiis waa nin nadiif ah, waxa uu aad u jeclaa inuu la tartamo Sheekha hadii la rabo halaga guuleesto” ayuu yiri odayaasha KG u sheegay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Dadka dhigaya banaanbaxyada iyo fowdada magaalada Baydhabo ayuu ka dalbaday odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed iney xal u raadiyaan oo wadajir wax lagu raadiyo loona dulqaato inta uga harsan dadaalka ay wadaan.
“Waxaan codsanayaa inaa wadajir wax ku raadino isku duubnaano, hadii ay dhacdo fowdo dhibka waa sii badanaa marka hala dulqaata waana idin maqanahay”, ayuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Maxamed Mursal ayaa magaalada Baydhabo u tagay Munaasabadda caleema-saarka Madaxweynaha cusub ee maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed oo ku beeganeed Arbacada todobaadkii hore. Guddoomiyaha ayaa la filayaa inuu maalmo kale ku sii qaato Baydhabo si loo sii wado dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed.
Maxaa loo xeeriyey in Bangiga Dhexe uu maamuli karo qof ajnabi ah?
Xildhibaankii 2aad oo ka baxay Xisbiga Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh